FIAD faha-V tany Maraoka : noresen-dahatra ny mpampiasa vola ho avy eto Madagasikara | NewsMada
FIAD faha-V tany Maraoka : noresen-dahatra ny mpampiasa vola ho avy eto Madagasikara
Nandray anjara tamin’ny fivoriambe iraisam-pirenena momba ny fampandrosoana an’i Afrika (Fiad)* faha-V, natao tany Maroc ny minisitry ny Indostria, Chabani Nourdine sy mpandraharaha maro, ny 16 sy 17 marsa teo. Attijariwafa bank nikarakara ny fihaonana nahitana sokajin’olona karazany maro.
Tonga nandray anjara tamin’io Fiad faha-V io tany Maraoka io ireo olom-panjakana, mpandraharaha, avy amin’ny Antenimieran’ny varotra, mpitantana orinasa, aty Afrika sy ireo mihevitra ho aty Afrika. 2.400 ny isan’ny mpandray anjara rehetra tamin’izany, efa miasa sy hiasa ho an’ny fampandrosoana ho an’i Afrika. 34 ireo delegasiona malagasy avy amin’ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina, samy manambara ny fahavononan’izy ireo amin’ny fampandrosoana ny toekarena eto an-toerana amin’ny alalan’ny fiaraha-miasa amin’ny any ivelany.
Izany fihaonana izany, momba an’i Madagasikara, nentina nampahalalana ny harena misy, nandresen-dahatra fa izao ny fotoana tsara hampiasam-bola eto an-toerana. Nitondrana fanazavana mifandraika amin’izany ireo fepetra manamora ny fidiran’ny mpandraharaha vahiny sy ny laminasan’ny fitondram-panjakana amin’ny ankapobeny (PND). Tsapan’ny delegasiona malagasy ny fanirian’ireo vahiny ireo ho avy aty Madagasikara, rehefa nitondran’ny minisitra Chabani Nourdine fanazavana ny tontolon’ny toekarena.
Nisy koa ny fihaonana manokana tamin’ireo mpitantana orinasa lehibe (ACCOR, Homlarco, Alliance…). Fitsidihan’ny minisitra sy ireo mpiara-dia taminy ny orinasa Somaca, mpanamboatra fiara Renault any Maraoka. Nampahafantarina ny delagasiona malagasy tamin’io fotoana io ny tantaran’ny Somaca. Vokatry ny fiaraha-miasan’ny fanjakana maraokanina sy ny sehatra tsy miankina lehibe izany, toy ny Renault. Tsara alain-tahaka ho an’i Madagasikara.
Lalana, herinaratra, fandriampahalemana …
Fahombiazana ny azo ilazana ny fandraisan’i Madagasikara anjara tamin’io Fiad io. Fantatry ny rehetra ny zava-misy eto an-toerana. Andrasana izany izao ny fahatongavan’ireo mpampiasa vola ireo, ho hita maso fa tsy vitan’ny fifampiresahana fotsiny tany ivelany. Manana andraikitra, noho izany, ny fitondram-panjakana mandamina sehatra maro, handresen-dahatra ireo vahiny ireo sy ny efa miasa eto an-toerana. Hojeren’ireo mpandraharaha, ohatra, ny lalana, famatsiana herinaratra, fandriampahalemana.
Fiad* : Forum international Afrique developement